Hawlgal Shabaab looga hortaggayo oo ka socdo Magaalada Jowhar | Dhacdo
Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa hawlgal xilliyada habeenkii ah ka bilaabay Magaalada Jowhar, iyadoona uu hawlgalku yahay mid amniga lagu xaqiijnayo.
Ciidamada Haramcad ayaa socod ku dhex mara xaafadaha Magaalada Jowhar, iyadoo mararka qaarkood ay dadka su’aalo weydiiyaan, dhalinyaradana waxay ku amraan inay shaararka/funaanadaha ay xiran yihiin kor u qaadaan.
Ciidamada ayaa sidoo kale xilliyada qaarkood roondo ku tagga kontoroolada laga soo galo magaaladaasi.
Hawlgaladii ugu dambeeyay ee magaalada laga sameeyay ayay ciidamada ku soo qabqabteen dad badan, kuwaa oo Shabaabnimo lagu tuhmayo.
Wararka ayaa sheegaya in dadkani lagu baarayo xarumaha hay’adaha ammaanka ay ku leeyihiin Xarunta Gobolka Shabellaha Dhexe ee Magaalada Jowhar.
Hawlgaladan ayay dadka reer Jowhar ku fasireen kuwo looga hortaggayo falalka amni-darro, haddii ay kaabiga inagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadan.
Maleeshiyada Al Shabaab ayaa bisha Ramadan kordhiya weerarada iyo dilalka qorsheysan, ee ay ka gaystaan magaalooyinka ay maamulaan Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Taliyaha Ciidamada Haramcad ee Magaalada Jowhar, Xabiib Salaad Fareyste ayaa dadka deegaanka ku ammaanay kuwo wada shaqayn wanaagsan la leh ciidamada, ayna ku soo wargeliyaan kuwa ay u arkaan inay amniga carqaladeynayaan.
Dowladda Somaliya ayaa bartamihii bishii October ee sanadkii hore Ciidamada Haramcad u daabushay Magaalada Jowhar, xilli loo diyaargaroobayay Doorashada Madaxtooyada iyo midda Baarlamaanka ee Hirshabelle.
Deegaanka Daarusalaam ee Magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn looga ciiday maalinta 1aad ee Munaasabadda Ciidul Fitriga. Dadweynaha ayaa...
Rooble oo dadweynaha kula hadlay Masjidka Isbahaysiga (SAWIRRO)
Geyiga Soomaalida oo maanta si isku mida looga ciidaayo
Wasiirka Duulista oo la kulmay Guddiga Diyaaradaha ee Kenya xayirtay
Rooble oo shacabka ugu hambalyeeyay Munaasabadda Ciidda
Farmaajo oo ka qaybgalay caleemo-saarka Madaxweynaha Uganda (SAWIRRO)